बाँस्कोटा अडियो प्रकरण – Chitwan Post
७० करोडको कमिसन डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका गोकुल बाँस्कोटाको राजनीतिमा अस्वाभाविक उदय र यात्रा दुर्घटनामा परेको छ । सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा ७० करोडको कमिसनबारेको अडियो सार्वजनिक भएपछि अहिले मुलुक त्यही प्रकरण र नेकपाभित्र देखिएको असमझदारीको भुङ्ग्राले तरङ्गित छ । गाउँघरको चिया पसलमा समेत कमिसन अडियोकै चर्चा छ । नेकपाभित्रको आन्तरिक जीवनमा समेत यसले हलचल ल्याइदिएको छ । यो बदनामीले सरकारको छविमाथि पनि धक्का लागेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन तथा पारदर्शिताको पक्षमा प्रमले व्यक्त गर्दै आएका प्रतिवद्धतालाई अडियोसँग जोडिएको संगठित नियत एउटा खरिद डिलमा ७० करोडको कमिसनको चक्कर हुन्छ भने अरु कति खरिद तथा कारोबारमा कुन हदसम्मको चलखेल हुन्छ ? अहिले आमनागरिकबाट उठेको प्रश्न हो । अहिले एक जना मन्त्रीको कमिसन डिलको अडियोमात्रै सार्वजनिक भयो । त्यो पनि सेटिङ र डिल नमिलेपछि बाहिर आएको हो । सेटिङ र डिल मिलेका कमिसन र घोटालाहरु अझै पनि रहस्यको गर्भमा छन् होला ! अब अनुसन्धानको जिम्मा लिएका निकायहरुले त्यतातिर खोतल्नुपर्ने र खन्नुपर्ने चुनौती छ ।
अहिले उनी छानबिनको घेरामा छन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यसमा सक्रियरुपमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर कारवाही अघि बढाउनैपर्छ । सबैतिरबाट गोकुल बाँस्कोटामाथि प्रहार भएको छ । यतिबेला यहाँ प्रश्न गोकुलको मात्र होइन, उनी त एउटा पात्र वा माध्यममात्रै हुन् । उनको निजी चाहना र चलखेलले मात्र यस्तो योजना सम्भव हुन सक्दैन । उच्चस्तरको बलियो ब्याकअप र एउटा संगठित डिजाइनबिना गोकुलले एक्लै यस्तो इच्छा र आँट गरेका छैनन् होला । यो प्रकरणमा डरलाग्दो संस्थागतरुपमा संगठित संलग्नता हुन सक्ने आशंका छ । नीतिगत निर्णयको आवरणमा केही सीमित पात्रहरु मालामाल हुने र राज्यलाई अरबौँ नोक्सानी पु¥याउने यस्तो खेलमा सम्बन्धित निकायको अनुसन्धान गरेर तथ्यसहित प्रमाण बाहिर ल्याउन आवश्यक छ । जसले गर्दा पाइपलाइनमा रहेका करोडौँ डिलहरु रोकिने छन् र गर्भमा रहेका घोटाला प्रकरण उत्खनन गर्ने ऊर्जा पनि प्राप्त हुनेछ । प्रमले मह¤वपूर्ण जिम्मेवारीसहित एकैपटक विभागीय मन्त्री बनाएपछि उनी एकाएक सरकारकै प्रभावशाली पात्रकै रुपमा उदाए । प्रमले सार्वजनिक समारोहमा गोकुलको उच्च प्रशंसा गरेको केही दिनमै यो प्रकरण बाहिर आएको छ । त्यसैले, गोकुलमाथि बर्सिएको आक्रोशको छिटाले यतिबेला बालुवाटार पनि ओभानो रहन सकेन । आज देशमा राजनीतिक तुलो राख्ने हो भने तुलाको एकातिर गोकुल बाँस्कोटा र अर्कातिर अरु सबैजस्तो भएका छन् । तर प्रमंले सार्वजनिकरुपमा दाबी गरेजस्तो राजनीतिक तुलोमा गोकुल केही दिन पनि टिक्न सकेनन् र उल्टो दुर्घटनामा परे । प्रमको राजनीतिक तुलो बाँस्कोटाले नै भाँचिदिए । बाँस्कोटाको अडियो प्रकरणले प्रमको सार्वजनिक छवि र निष्ठाप्रति नागरिकस्तरबाट प्रश्न उठाइदिएको छ । यो प्रकरणले नराम्रो ठेस लागेको छ प्रमलाई । गोकुलको व्यक्तिगत बदनामीले मात्र यो प्रकरणको पटाक्षेप हुनेवाला छैन ।
गोकुल बाँस्कोटाको ७० करोड कमिसन लेनदेन विषयक वार्ताको अडियो प्रकरण सार्वजनिक भएपछि र यो भ्रष्टाचारजन्य कुकृत्यका लागि उनले राजीनामा गरेदेखि नेपाली राजनीति गर्माउनुपर्नेमा सेलाएर जाने त होइन भनेर आमनागरिक चिन्तित छन् । न सरकार न नेकपा नै यसबारेमा बोलेका छन् । सरकार र पार्टीले यसलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । अरुसँग गरिएका ठेक्का सम्झौतासमेत तोड्दै झन्डै एक अर्बभन्दा बढीका खरिद परियोजना कसरी यिनै मन्त्रीका हातमा आए ? ग्लोबल टेन्डरमा गइसकेका परियोजना पनि त्यो प्रक्रिया रोकेर कसरी फरक पाटोमा आए ? मुलुकको प्रचलित कानुनअनुसार हो भने ग्लोबल टेन्डरबाट हुनुपर्ने खरिद प्रक्रिया नीतिगत निर्णय हो र क्याविनेटको निर्णयबेगर हुन नसक्ने यी काम प्रमको सहमतिबेगर सम्भव थियो कि थिएन ? यो एक्लो र अलग्गिएको घटना हो जस्तो लाग्दैन । यो कमिसनको श्रृङ्खलाको एउटा सानो कडी हो, जसका यसपछिका केही सत्यहरु सार्वजनिक हुन बाँकी नै छन् ।
प्रमं ओलीको राजसी ठाँटबाँटका साथ मनाइएको जन्मोत्सव र नेकपाको सचिवालय बैठकमा संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनेको विषयले राजनीतिक गतिलाई तत्काल अन्यत्र मोडेको हुँदा सरकारले केही राहत महसुस गरेता पनि यी विषयमध्ये जन्मोत्सवले प्रमको व्यक्तित्वमा मात्र धक्का लागेको छैन, नेकपाले हालसालै जारी गरेको आचारसंहिताको पनि धज्जी उडाएको छ । अडियो प्रकरणले उठाएको मुद्दा ओझेलमा पर्नेवाला देखिँदैन, किनकि यो सितिमिति सेलाउने मुद्दा पनि होइन । यस विषयमा अख्तियार अनुसन्धान आयोगले बिनाढिलाइ भित्री तहसम्म नै छानबिन गरेर सत्यतथ्य जनतासमक्ष ल्याउनैपर्छ । साथमा यस काण्डमा प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा जुन ढङ्गले मुछिएका भए पनि सबैलाई कारबाहीको भागीदार बनाउनैपर्छ । यस विषयलाई नेकपाले पनि आफ्नो तहमा छानबिन गर्न जरूरी छ । किनकि, यदि यस्तो प्रवृत्ति बढ्दै जाने हो भने स्वयं पार्टीलाई समेत ठूलो धक्का लाग्नेछ । अडियो प्रकरणको छानबिन र कारबाही एउटा पक्ष हो । यो प्रकरणसँगै आमनागरिकमा उर्लिएको आक्रोश र आलोचना महँगो सावित हुनेछ । भोलिका दिन छानबिन गर्ने निकायले तथ्य तथा प्रमाण पुगेन भनेर सफाइ पनि दिन सक्ला वा चोख्याउला, तर आमनागरिकको कठघराबाट उम्किन निकै कठिन हुनेछ । नागरिक तहबाट एकपटक गिरेपछि कुनै शक्तिले चोख्याउन वा जोगाउन सक्दैन ।
भ्रष्टाचारविरूद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरेको सरकारका निम्ति गम्भीर प्रकृतिको आरोप हो यो । कुनै प्रकरण सार्वजनिक भएसँगै राजीनामा दिने र त्यो प्रकरण त्यत्तिकै सेलाएका विगतका घटना हाम्रासामु छन् । यो प्रकरणमा संलग्न पात्रहरुलाई गम्भीर अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न अख्तियार तयार हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारी भए जोसुकैलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ । विदेशमा प्रम र राष्ट्रपति भ्रष्टाचारका मुद्दामा जेल परेका समाचार आइरहँदा नेपालमा भने अनावश्यक तर्क–वितर्क गरेर यस्तो प्रवृत्तिको बचाउ गर्ने हो भने देशमा सामाजिक र आर्थिक परिवर्तन सम्भव छैन । देशमा राजनीतिक सर्वोच्चता स्थापित गर्ने हो भने यस्तो मुद्दालाई छूट दिँदा गलत नजिरसमेत स्थापित हुनेछ र यस्तै नजिरका आडमा लाखौँ भ्रष्टाचारीसमेत जन्मिनेछन् ।